Build Zimbabwe Alliance Inoti Haisi Kuzobatana neMamwe Mapato Musarudzo
Doctor Noah Manyika
Mutungamiri webato rinopikisa reBuild Zimbabwe Alliance, BZA, Doctor Noah Manyika, vanoti bato ravo harina kubatana nemamwe mapato anopikisa kana kupinda mumibatanidzwa iripo nekuti hazvisi kuoneka kuti mapato aya akamirirei uye kuti gwara nezvinangwa zvavo ndezvipi.
VaManyika vanoti bato ravo ndiro rega rine gwara uye ndiro rakatanga kubudisa gwaro regwara nevimbiso yaro kuvanhu izvo zvavanoti zvave kutevedzerwa nemamwe mapato.
VaManyika vanoti chinangwa chebato ravo ndechekukwikwidza munzvimbo dzese dzeparamende, seneti nekanzuru.
“Mukatarisa ‘manifesto’ yedu, muchaona kuti zvakasiyana nezvinoda kuitwa nemamwe mapato. Tinotaura isu kuti tichabvisa mamwe mapazi ehurumende aripo akawanda wanda asina basa raarikuita, akangosikirwa chete kuti shamwari dzevanhu varikutungamira vawane mabasa; tinoabvisa iwayo, toita mapazi ehurumende gumi nemashanu chete,” VaManyika vaudza Studio7.
Kunyange hazvo VaManyika vasiri kuda kupinda musarudzo vakabatana nemamwe mapato, nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa anofanirwa kubatana kuitira kuti akunde Zanu PF zvine mutsindo.
Hurukuro naVaNoah Manyika